April 24, 2019 - PuraKhabar
नारायणी अस्पतालमा एक्कासी अख्तियारको छापा
April 24, 2019 Purakhabar News
पर्सा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा छापा मारेको छ । १३ गुणा बढी मूल्यमा केमिकल्स खरिद, महंगो किलिया मेसिन सुटुक्क साटिएको, पुरानो मितिमा कागजात मिलाएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करिब चार दर्जनलाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि हेटौंडास्थित अख्यितारको टोलीले आज छापा मारेको हो । अख्तियारका देवकुमार राई नेतृत्वको टोलीले करिब साढे ५ घन्टा अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हक, स्टोरका दामोदर अधिकारी, प्रयोगशालाका हिराबाबु पाण्डे, सचिन्द्र यादव, फार्मेसीका विजय यादवलगायत अन्य कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारका अनुसार केमिकल्स खरिदको कागजातको प्रतिलिपि अनुसन्धानका लागि लगिएको छ…
राजस्व तिरेका ५ लाख ३३ हजारले ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ लिन बाँकी
काठमाडौं । सरकारले चार वर्षअघि ‘स्मार्ट’ सवारी चालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) वितरण थालेको थियो । तर, यातायात व्यवस्था विभागले प्रक्रिया पु¥याएका सबैलाई लाइसेन्स दिन सकेको छैन । अहिले पनि पाँच लाख बढी सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भन्दै चार वर्षअघि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ वितरण थालेको थियो । यसबीचमा १४ लाख १८ हजार ९४ सेवाग्राहीले आवेदन दिएपनि ८ लाख ४४ हजार ५ सय ६३ जनाले मात्रै लाइसेन्स पाएका छन् । राजस्व तिरेका ५ लाख ३३ हजार ५ सय ३१ जना अझै लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन् । आज आउँछ कि भोलि भनेर…
रानीपोखरीका नाममा मेयरले खर्च गरे जलपानमै एक करोड १३ लाख
काठमाडौं, ११ वैशाख । रानीपोखरी निर्माणमा महानगरपालिकाले दुई करोड घाटा व्यहोरेको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न १० वैशाख ०७३ मा निर्माण व्यवसायी वर्ल्डवाइड/कँडेल/के एन्ड केजी जेभीसँग ६ करोड २९ लाखमा सम्झौता भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । काम सुरु गर्न महानगरले दुई करोड तीन लाख भुक्तानी गरेको थियो । तर, पुरातत्व विभागले परम्परागत शैलीमा बनाउन निर्देशन दिएपछि करिब दुई वर्षपछि १२ पुस ०७४ मा ठेक्का रद्द भयो । जसका कारण निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकम महानगरलाई नोक्सानी भएको महालेखाले औँल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फजुल खर्चमा रेकर्ड नै कायम गरेको छ ।…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित बहालबाला पाँच जना मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ। मंगलबार कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चले घरेलु मदिरा नियन्त्रण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री मातृका यादव, स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।सर्बोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ। मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, सारदा गुरुङ र नविन कार्कीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले बैशाख १३…
विश्वकपमा १६ टिमले खेल्न पाउनुपर्थ्यो : सन्दीप लामिछाने
१० वैशाख काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले एक वर्षयता विश्वका अधिकांश ठूला टी–२० लिग खेलिसकेका छन् । उनी लण्ड्समा भएको खेलमा विश्व ११ को समेत हिस्सा थिए तर, आगामी महिना ईंग्ल्यान्डमा हुने क्रिकेटको कुम्भमेलामा नेपाली किशोरको स्पिन जादु हेर्न पाइने छैन । सन्दीप स्वयम् पनि विश्वकप खेल्न नपाउँदा निराश छन् । क्रिकेट अष्ट्रेलियाले हालै उनको एक अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ, जसमा सन्दिपले १० वटा मात्रै देशले विश्वकप खेल्न पाउँदा उदियमान क्रिकेट राष्ट्रहरुलाई चोट पुगेको बताएका छन् । साथै उनले विश्वकपमा १४ देखि १६ टिम सहभागी गराइनुपर्ने धारणा पनि राखे…
कमल थापाहरु धर्म-प्रचार गर्दै हिँड्ने, क्रिश्चियनलाई कोठाबाटै पक्राउ गर्ने ?
श्रीलंकामा क्रिश्चियन समुदायमाथि गरिएको हमला एक धार्मिक समूह मात्रै नभएर सिंगो मानव विश्वकै लागि अप्रिय घटना हो । यसको विरोध र निन्दा जति गरे पनि सायद अपूर्ण हुन्छ । जुन घटनाले नेपाल लगायत एसियाली क्रिश्चियन समुदायमा एक किसिमको आतंक नै उत्पन्न भएको छ । तर एक साता नबित्दै नेपाल प्रहरीले दाङको घोराहीस्थित एक होटलमा बसिरहेका ५ जना क्रिश्चियन समुदायका मानिसलाई पक्राउ गरेको छ । होटलको कोठामा बसिरहेको अवस्थामा ३ नेपाली सहित एक अमेरिकी र एक भारतीय नागरिकलाई पूर्व जानकारी विना नै पक्राउ गरेको छ । पक्राउ गर्नुको कारण थियो, धर्म…
यी ९ वटा मन्त्र: जसले मानिसको जीवन नै परिवर्तन हुने विश्वास गरिन्छ !
आफ्नो ग्रह दोषले गर्दा मानिसहरुले अनेकौ समस्याहरु झेलिरहेको हुन्छन्। यस्ता उपायहरु छन् जसको सही ढंगबाट सदुपयोग गरियो भने ग्रहलाई अनुकुल बनाएर लाभान्वित पनि बनाउन सकिन्छ। यी नवग्रहको मन्त्र जप गर्नुहोस् १) सूर्य मन्त्र – ॐ ह्रीं ह्रों सूर्याय नम २)चन्द्रमा मन्त्र – ॐ ऐं क्लीं सोमाय नम ३)मंगल मन्त्र – ॐ हूं श्री मंगलाय नम ४) बुध मन्त्र – ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नम ५) बृहस्पति मन्त्र- ॐ ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतये नम ६) शुक्र मन्त्र – ॐ ह्री श्रीं शुक्राय नम ७) शनि मन्त्र – ॐ ऐं ह्रीं…
बिगत ९ बर्ष देखि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनी क्लासिक टेक प्रालिले प्रति महिना रु. ६९२ मा ४० एमबीपीएस गतिको “बुलेट-जीप्लान” याेजना ल्याएकाे छ । क्लासिक टेकले ईन्टरनेटको बढ्दो गतिको मागलाई ध्यानमा राख्दै बजारमा ४०, ५० तथा ६५ एमबीपीएसका थप याेजनाहरू समेत बजारमा ल्याएको छ । नेपालमा पहिलो पटक कम मूल्यमा यति धेरै ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउनुका यसका साथैं जडान खर्च तथा फाईवर केवलमा शतप्रतिशत छुटका साथैं धरौंटी रकम बुझाउनु नपर्ने क्लासिक टेकले जनाएकाे छ । क्लासिक टेकले खल्ती पेमेन्ट गेट्वेको माध्यमबाट रिचार्ज गरी सो सेवा लिने ग्राहकहरुलाई ५ प्रतिशतको…
कर नतिरेको भन्दै एनसेलको सिम जलाउदै युवा
राम बराल / नवलपुर कावासोती, ११ बैशाख । नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल एक्जियटाले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै नवलपुरका युवाहरुले एनसेलको सिम जलाएका छन् । सदरमुकाम कावासोतीस्थित फलफूलचोकमा सिम जलाउँदै नवलपुरका सामाजिक अभियन्ताहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै आजदेखि एनसेलको सिम प्रयोग नगर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । सामाजिक अभियन्ता किरण भुर्तेलको संयोजकत्वमा उपस्थित युवाहरुले फलफूलचोकमा एनसेलका सिम, एनसेल सिम खरिद गर्दा लिइने फारम लगायतका एनसेलसँग सम्बन्धित कागजपत्र जलाउँदै आजदेखि एनसेलको सिम प्रयोग नगर्ने उद्घोष गरेका हुन् । सरकारलाई ४० अर्ब भन्दा बढी राजश्व नबुझाएर…
रुपन्देहीमा एक जनाको हत्या, हत्या लुकाउन शव गाडिएको अवस्थामा फेला
११ बैशाख, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका -११ भूपू सैनिकटोलका मीनबहादुर गौतमको विद्युतीय धरापमा पारेर हत्या भएको फेला परेको छ । वैशाख १ गतेदेखि हराएका गौतमको खोजतलास गर्दा हत्यापछि शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । बदेल मार्नका लागि स्थानीय युवा चन्द्रबहादुर थापा, नरबहादुर पुन र उपेन्द्रबहादुर शाहले थापेको विद्युतीय धरापमा परेर गौतमको मृत्यु भएको र मृत्युपछि शव लुकाउन जंगलमा गाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।देवदह नगरपालिका–९ को जंगलमा गौतमको शव फेला परेको छ । स्थानीय रोहणी खोलामा थापिएको विद्युतीय धरापमा परेर गौतमको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले विद्युतीय धराप थाप्ने…